Ny varahina dia firaka varahina sy zinc misy fahaiza-miasa, harafesina ary fanoherana mahery vaika nefa tsy dia mitondra herinaratra. Ny zinc ao anaty varahina dia manome fanoherana mahery vaika ary mamela tanjaka avo lenta kokoa. Ankoatr'izay dia manome hamafin'ny avo kokoa raha ampitahaina amin'ny varahina. Ny varahina no firaka vita amin'ny varahina lafo vidy indrindra ary fitaovana mahazatra ihany koa ho an'ny harato tariby. Ny karazana varahina mahazatra anay ampiasaina amin'ny varahina tariby dia misy varahina 65/35, 80/20 ary 94/6.
Copper Wire harato lamba (Shielded Wire harato)
Ny varahina dia metaly malefaka, mora volavolaina ary mora mandehandeha manana fifehezana hafanana sy herinaratra avo be. Rehefa tratry ny rivotra lava be dia misy ny fiasan'ny oksidana miadana mba hamorona sosona oksida varahina ary hanatsara kokoa ny fanoherana ny harafesin'ny varahina. Noho ny vidiny lafo, ny varahina dia tsy fitaovana mahazatra ho an'ny harato tariby.
Ny varahina phosphor dia vita amin'ny varahina miaraka amin'ny atin'ny phosforus 0,03 ～ 0,35%, atin'ny Tin 5 ～ 8% Ireo singa hafa hafa toy ny vy, Fe, zinc, Zn, sns. Azo ampiasaina amin'ny fitaovana elektrika sy mekanika izy io, ary ny fahamendrehana dia avo kokoa noho ny an'ny vokatra firaka varahina mahazatra. Ny harato tariby vita amin'ny varahina dia ambony noho ny harato varahina amin'ny fanoherana ny harafesin'ny atmosfera, izay antony lehibe mahatonga ny fampiasana harato varahina manomboka amin'ny fampiharana an-dranomasina sy miaramila ka hatramin'ny efijery bibikely sy trano. Ho an'ny mpampiasa indostrialy ny lamba tariby, ny harato varahina dia sarotra sy tsy azo ovaina raha oharina amin'ny varahina vita amin'ny varahina toy izany, ary vokatr'izany dia matetika ampiasaina amin'ny fisarahana sy ny filtration.
Tady tariby mny kapila esh (indraindray antsoina hoe écran fonosana na kapila fanivanana) dia vita amin'ny takelaka tariby vita amin'ny vy na voadio. Ny kapila harato kalitao kalitao dia misy fitaovana metaly isan-karazany ary misy amin'ny habe, fomba ary hateviny maro ho an'ny fampiharana rehetra. Ny vokatray dia matanjaka, maharitra, azo ampiasaina ary marobe.
Ny efijery sivana varingarina dia vita amin'ny efijery varingarina tokana na multilayer amin'ny sisin'ny fantsom-bokatra na sisin'ny sisin'ny alimika. Izy io dia maharitra sy matanjaka izay mahatonga ny efijery hahomby kokoa amin'ny fandroahana polymer toy ny polyester, polyamide, polymer, plastika tsofina, Varnishes, loko.
Ny efijery sivana silila dia azo ampiasaina ho sivana hanasaraka ny fasika na ny sombin-javatra tsara hafa amin'ny rano amin'ny indostrialy na fanondrahana.
Volovolo tariby nofonosina Monel
Ny harato tariby vita amin'ny monel dia fitaovana firaka mifototra amin'ny nikela miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina tsara amin'ny ranomasina, solvents simika, chloride sulfur amonia, chloride hydrogène, ary haino aman-jery asidra maro karazana.
Monel 400 tenona tariby harato dia karazana harato-harafesina mahazaka misy dosis lehibe, fampiharana malalaka ary fahombiazana feno. Izy io dia manana fanoherana tsara harafesina ao amin'ny haino aman-jery hydrofluorika sy haino aman-jery fluor ary koa mahazaka fanoherana ny harafesina azon'ny lye mafana mifantoka. Mandritra izany fotoana izany dia mahatohitra ny harafesina avy amin'ny vahaolana tsy miandany, ny rano, ny ranomasina, ny rivotra, ny fitambaran'ny organika, sns. Ny lafiny iray manan-danja amin'ny harato dia ny ankapobeny dia tsy mamokatra triatra harafesina ary misy fikajiana tsara.
Takela-by Window Stainless Steel:
Ny sarimihetsika bibikely 1.Stainless dia namboarina tamin'ny tariby tsy misy fangarony, izay tsy vitan'ny hoe manatsara ny fahitana azy amin'ny savaivony tsara, fa mampatanjaka kokoa ity vokatra ity noho ny efijan'ny bibikely mahazatra. Ny lamba fitaratra varavarankely tsy manara-penitra dia efijery bibikely fanatsarana hita maso natao mba hampitomboana ny fomba fijery ivelany, hahatonga azy ho maranitra sy hamirapiratra kokoa. Izy io dia mamela ny fikorianan'ny rivotra avo lenta ary mahafeno ny fenitra avo amin'ny fiarovana ny bibikely. Izy io dia mety amin'ny famoronana amin'ny fampiharana mahazatra toy ny varavarankely, varavarana ary lavarangana ary azo antoka ampiasaina amin'ny hazo voatsindry.
Fitaovana: tariby vy tsy misy fangarony. 304, 316, 316L.
Size: 14 × 14 harato, 16 × 16 harato, 18 x14 harato, 18 x18 harato, 20 x20 harato.
Tsy harafesina na harafesina, eny fa na dia any amin'ny morontsiraka amoron-dranomasina aza na rehefa misy oram-be mivatravatra na toetr'andro mando.
Manolotra fahitana ivelany lehibe noho ny fananganana tariby vy tsara izay mitazona ny ankamaroan'ny bibikely rehefa manome anao fomba fijery tonga lafatra ny manodidina anao.
Ampiasao soa aman-tsara amin'ny hazo voatsindry mafy.
Milamina sy maharitra.
manolotra onjam-peo tena tsara, mamela ny rivotra mangatsiaka hamaky ny tranonao.
Epoxy mifono sivana tariby harato no tena miorina amin'ny tariby vy tsotra voatenona miaraka ary nopetahany vovoka resin epoxy kalitao amin'ny alàlan'ny dingan'ny famafazana electrostatic mba hahatonga ity fitaovana ity hanoherana ny harafesina sy ny asidra. Ny epoxy mifono tariby harato dia matetika ampiasaina ho toy ny sosona fanohanana ny sivana izay manolo tariby nandrisika harato ary mety indrindra noho ny fahamarinan-toerana ny rafitra ary koa ny takatry, izany no ampahany lehibe amin'ny sivana. Matetika ny loko epoxy coating dia mainty, fa azonay atao koa ny manolotra loko arakaraka ny zavatra takinao, toy ny volondavenona, fotsy, manga, sns. Ny epoxy mifono tariby harato misy amin'ny horonana na nanapaka ho dian-kapoka. Nanolo-tena foana izahay hanolotra epoxy mifono tariby harato miaraka amin'ny toe-karena, ara-tontolo iainana ary maharitra ho anao.
Fitaovana: 304, 304L, 316, 316L
Sakan'ny horonan-taratasy: 36 '', 40 '', 48 '', 60 ''.
Fananana: tsy mahazaka asidra, fanoherana alkali, tsy azo arahana lohany ary maharitra
Ampiasao: Fanasiana sy sivana amin'ny toetran'ny asidra sy alkaly. Harato maloto ao amin'ny solika, hanasivana ary harato fitiliana ao amin'ny indostrian'ny fibre simika sy simika, indostria fanodinana herinaratra manasa asidra.
Izy io dia mandray fitaovana vita amin'ny vy tsy misy fangarony 316, 316L, 304, 302 sns. Ny vokatra dia mety amin'ny harato fefy ambony kalitao, talantalana fivarotana lehibe, haingon-trano sy ivelany, sobika sakafo, fiompiana volom-borona tsara kalitao. Izy io dia manana fahamendrehana avo lenta, tsy misy harafesina, manohitra harafesina, asidra / alkali-resisting ary fanoherana ny loha, sns.
Crimped tariby harato dia vita amin'ny savaivony tariby manomboka amin'ny 1.5mm ka hatramin'ny 6 mm. Amin'ny dingam-pandehanana mialoha, ny tariby dia miforona (crimped) amin'ny milina mazava tsara izay mampiasa ny rotary dies izay mamaritra tsara ny elanelan'ny tariby. Manome toky izy ireo fa mihidy mafy ny tariby eo amin'ny sampanan-dalana. Ireo tariby alohan'ny crimped dia atambatra ao amin'ny milina fivoriamben'ny efijery (looms). Ny karazana crimping dia mamaritra ny karazana tenona. ISO 4783/3 dia mamaritra ny karazana tenona mahazatra.